Weligaa ha quusan. Waxyaabaha waaweyni waqti ayey qaataan. Samir. - qarsoodi - Quotes Pedia
Weligaa ha quusan. Waxyaabaha waaweyni waqti ayey qaataan. Samir. - Qarsoodi
Nolosha, waxaad la kulmi kartaa xaalado kala duwan marka aad dareemaysid inaad quusanaysid. Nin caqli badan oo caqli badan weligiis sidaas ma sameyn doono! Xusuusnow inaysan waxba u beddelayn guul isla markiiba isku daygii ugu horreeyay.
Dhamaan shakhsiyaadkaas guusha leh ee aad maanta ku aragto hareerahaaga maahan waxaan ahayn kuwa aan waligood aqbalin guuldarada. Waxaa laga yaabaa inay noloshooda ku guuldaraysteen milyan jeer, laakiin ma aysan aqbalin xitaa halmar. Had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa iyagu sii waday isku dayga marar badan.
Noloshu ma aha sariir ubaxyo ah, oo dariiqaan qunyar-socodka ah, waxaa laga yaabaa inaad dhibaatooyin kala kulanto, laakiin guusha ayaa ah kuwa ku sii socda wadadaas oo dhan in kasta oo caqabadahaas jidkaas soo maray oo dhan ah.
Joogtayntu waa cunsur aad muhiim ugu ah go'aaminta haddii aad ku guuleysan doontid noloshaada iyo in kale. Waxa jiri kara wakhtiyo aad dareemi lahayd inaad quusto, laakiin daqiiqada aad dhiibto, waad aqbali doontaa guuldaradaada oo aad diidi doontaa inaad mar kale kacdo.
Hadaad aqbasho guuldaradaada, ciyaarta ayaa ku dhamaaneysa halkaas ka dibna. Hadaad runti rabto inaad guul gaarto, waa inaad naftaada kalsooni ku qabtaa oo aad bartaa inaad diido inaad dhiibto xitaa markii marar badan lagaa adkaaday.
Xusuusnow in guusha ay gaarto kaliya kuwa aan quusan. Kuwa ka tanaasulay waa kuwa kaliya ee sii wata marmarsiiyo marmarsiiya inta noloshooda ka hartay. Haddii aad runti rabto inaad naftaada u noqoto tusaale adduunka u barto inaad shaqayso, halkaad aqbali lahayd guuldaradaada.
Samir oo wakhti sii naftaada. Waxyaabaha dhici maayaan habeenki. Ma arki kartid naftaada adoo taagan midig ugu sarreeya guusha habeen dhan. Waxaad u baahan tahay inaad siiso naftaada waqti ku filan oo aad hore ugu socoto ilaa aad ka gaareyso meesha ugu sarreysa.
Sidoo kale, waxyaabo ayaa waqti qaata si ay u dhacaan. Waqtiyo badan, dadku waxay u muuqdaan inay fashilmaan kaliya sababtoo ah waxay lumiyaan sabirkooda bartamaha. Haddii aad runtii rabto inaad ku guuleysato guul, waxaad u baahan tahay inaad fahamto ahmiyadaha aqbalaadda xaaladaha markay yimaadaan, welina iimaankaaga ilaali. Hayso rajo, oo waad ku guuleysan kartaa wax kasta oo aad waligaa rajaynaysay!
Noqo xigasho Bukaano
Quotes Quusin weyn
Xigashooyinka dhiirigalinta weyn
Xigashooyin waaweyn oo kusaabsan nolosha
Xigashooyin waaweyn oo ku saabsan guusha
Xigashooyin waaweyn oo xigmad leh
Waligaa Ha Bixin Quusin dhiirigelin ah
Waligaa Ha Jirin Isku dayga Quotyada
Ha ku adkaysan khaladaadka hore maxaa yeelay ma jiraan wax aad sameyn karto oo aad ku beddesho. Diiradda saar hadba halkaad joogto maanta oo abuur mustaqbalkaaga. - Qarsoodi
Ha ku adkaysan khaladaadka hore maxaa yeelay ma jiraan wax aad sameyn karto oo aad ku beddesho. Xoogga saar halka aad joogto…
Weligaa naftaada ha lumin inta aad isku daydo inaad qabato qof aan dan ka laheyn inuu ku luminayo. - Qarsoodi
Weligaa naftaada ha lumin inta aad isku daydo inaad qabato qof aan dan ka laheyn inuu ku luminayo. - Qarsoodi…
Duufaanada oo dhami uma yimaadaan inay carqaladeeyaan noloshaada, qaar baa u yimaada inay jidkaaga nadiifiyaan. - Qarsoodi
Waxaad ka heli doontaa duufaano badan oo ku soo socda wadada noloshaada, laakiin xusuusnow inaysan ...
Waqti ha dhumin oo isku day inaad dadka ka dhigto inay ku jeclaadaan. Waqtigaaga la qaado kuwa howsha qabtay. - Qarsoodi
Noloshu waa gaaban tahay oo waxay ka buuxisaa tacabur. Noloshu waxay bixisaa naxdin dhinac kasta oo ay leedahay. Adiga…
Waxa ugu fiican ee aad ku qarash gareeysid xiriirkaaga waa waqti, wada-hadal, faham, iyo daacadnimo. - Qarsoodi
Si aad xiriir u lahaato, uma baahnid wax hadiyado ah oo macmal ah. Qalabka waligood ma noqon karaan kuwo kufiican…